Samachar Batika || News from Nepal » १८ वर्षीय युवक ग’र्भवती, यस्तो छ सबैलाई रुवाउने त्यो दुखदायी पी’डा !
१८ वर्षीय युवक ग’र्भवती, यस्तो छ सबैलाई रुवाउने त्यो दुखदायी पी’डा !
तर अमेरिकामा चाहिँ एउटा अनौठो मामिला सार्वजनिक भएको छ । एकजना १८ वर्षीय अमेरिकी युवक ग’र्भवती भएका छन् । अहिले उनको कोखमा ४ महिनाको भ्रू’ण हुर्किरहेको छ । ती युवकको ग’र्भ रहेको तस्वीर पछिल्लो समय सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ ।
उनको नाम मिकी च्यानेल हो । उनी अमेरिकाको बोस्टन सहरमा बस्छन् । उनी पुरुष हुन् तर उनको शरीरमा प्रजनन प्रणालीचाहिँ महिलाको छ । सोही कारण उनले ग’र्भाधारण गरेका हुन् ।
मिकीको जन्म पुरुषकै रुपमा भएको थियो । उनकी आमाको ग’र्भको जाँच गर्दा ग’र्भमा छोरी रहेको डाक्टरहरुले बताएका थिए । तर जब छोराको रुपमा मिकी जन्मिए, डाक्टरसमेत अचम्ममा परे । उनको शरीरमा पुरुषकै यौ’नां’ग थिए । तर उनको शरीरभित्र चाहिँ महिलाको जस्तै पा’ठेघर, अण्डासय लगायतका अं’ग रहेछन् । यसलाई चिकित्सा भाषामा ‘प’र्सिस्टेन्ट एमलेरिएन डक्ट सिन्ड्रोम’ अर्थात् पि’एम’डिएस भनिन्छ ।
केटाको रुपमा जन्मिए पनि बाल्यकालदेखि नै उनको आनीबानी केटीको जस्तो हुन थाल्यो । आफ्नो जिउडाल, मनोकांक्षा तथा आनीबानीहरु केटीको जस्तो हुँदा उनले आफ्ना साथीसँगी तथा समाजसामु ल’ज्जित महसुस गरेका थिए । तर उनलाई उनको परिवारले पूरा साथ दियो ।
परीक्षणका क्रममा उनको पेटभित्र पा’ठेघर तथा अ’ण्डासय लगायतका परिपक्व महिला प्र’जनन अं’ग रहेको पत्ता लागेसँगै उनीमा सन्तान प्राप्तिको अभिलाषा जाग्यो । बाहिर पुरुष यौ’नांग भए पनि उनमा यौ’निक रुपमा सक्रिय पुरुषको लक्षण थिएन अर्थात् उनी बाँ’झो थिए । तर शरीरभित्रको महिला प्र’जनन प्रणालीका कारण उनी ग’र्भाधानका लागि सक्षम रहेको ठहर गरियो ।
डाक्टरहरुले अस्पतालमा निरन्तरको प्र’जनन उपचार तथा कृत्रिम ग’र्भाधान पश्चात् उनको पा’ठेघरमा भ्रू’ण प्र’त्यारोपण गरिएको हो । उनको यो नी नभएको हुनाले पेटमा श’ल्यक्रिया गरेर पा’ठेघरभित्र भ्रू’ण हालियो । गर्भ ९ महिना पुगेपछि त्यसैगरी श’ल्यक्रिया गरेर बच्चा बाहिर निकालिनेछ ।
प्रकाशित मिति २२ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:४६